लकडाउनको अवस्थामा गर्भवती महिलाको रहस्यमय मु’त्यु । सामजिक संजाल प्रयोगकर्ता को दोसि लाई कार्वाही को माग । – Namaste Dainik
लकडाउनको अवस्थामा गर्भवती महिलाको रहस्यमय मु’त्यु । सामजिक संजाल प्रयोगकर्ता को दोसि लाई कार्वाही को माग ।
April 23, 2020 April 25, 2020 NamastedainikLeaveaComment on लकडाउनको अवस्थामा गर्भवती महिलाको रहस्यमय मु’त्यु । सामजिक संजाल प्रयोगकर्ता को दोसि लाई कार्वाही को माग ।
पाँचथर,यासोक । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका २ सराङडाडा स्थीत बतासेमा गर्भवती महिलाको रहस्यमय मु’त्यु भएको छ । सात महिनाको गर्भ भएकी मुना पौडेलको झु’न्डि’एको अवस्थामा रहस्यमय मृ’त्य भएको हो । घर नजिकै रहेको टाँकीको रुखमा प्लाष्टिको डोरीमा झु’न्डि’एको अवस्थमा पौडेलको श’व फेला परेको थियो । दुई सन्तानको आमा पौडेलको रहस्यमय अवस्थामा स’ब फेला परेको माइती पक्षको आरोप छ ।
सरिरको बिभिन्न ठाउँमा आलो निल डाम छ । अनुहारमा चोट पटक भइ खुनले ल”तपतिएको देख्दा आ’त्मह’त्या’ हुन नसक्ने मृ’तक पौडेलका मामा दुर्गा बहादुर थापाले बताए । झु’न्डिए’को अवस्थामा कसरी निल डाम र चोट पटक हुन्छ ? अनुहार र हातको कुहिनोमा घाउ चोट छ । पछाडीको कपाल अगाडी आएर अनुहार छोपीएको छ यस्तो अवस्थामा आ’त्मह’त्या नभइ ह’त्या भएको हो थापाले दा’वि गर्दै भने ।
विबाह भएको लामो समयदेखि परिवारमा नराम्रो सम्बन्ध भएको मृ’तक पौडेलले मा’इती पक्षलाई सुनाउँदै आएकी थिइन । पौडेलका मामा दुर्गा थापा भन्छन् भान्जीलाई सासु, ससुरा र ज्वाइले बारम्बार कुटपिट गरी घर बस्न नसक्ने अव’स्थामा पारेपछि गत फागुन १४ गते घर आएकी थिइन् । त्यस्तैमा २०७७ बैसाख ३ गते ज्वाइ ससुरा’ली आई सम्झाइ बुझाइ घरबाट लिएर गएका थिए । तर त्यसको तीन दिन बि’त्न नपाउँदै भान्जी’ झु’न्डि’एको अवस्थामा फेला परेको खबर आयो । त्यहाँ गई हेर्दा संकास्पद अवस्थामा झु’न्डिएको देखेपछि छानविन गर्न प्रहरीमा निवेदन दिएको थापाले सुनाए ।
यता अधिकारी परिवारले ह’त्या नभइ आ’त्म’ह’त्या भएको दावी गर्दै आएको छ । पौडेलका श्रीमान जीवन अधिकारीले प्रहरीमा दिएको बयानमा यस्तो दावि गरेका हुन । परिवारका सबै सदस्यहरु खाना खाएर सुतेका थियौं । बिहान ओछ्यानमा म संग सानो छोरा मात्रै थियो । उठेर बाहिर हेर्दा घर छेउको टाँकीको रुखमा झु’न्डि’एको अवस्था श्रीमती फेला परिन् अधिकारीले भने । परिवासंग छुटिएर नजिकै हामी बस्दै आएका थियौ ।
घट्ना’ घटेको साँझ म बुबाको कोठामा टीभी हेरेर आफ्नो कोठामा फर्किदाँ उनि नि’दाइसकेकी थिइन् म पनि श्रीमती सुतेको खाट छेउको खाटमा सुतेको थिए । बिहान हेर्दा ओेछ्यानमा नभएपछि पानी लिन गइन् होला भन्ने लागेर उठेर हेर्दा झु’न्डिएको अवस्थामा श्रीमतीलाई देखी हल्ला खल्ला गरी प्रहरीलाई खबर गरेको अधिकारीको दावि छ ।
जीवनले प्रहरीमा दिएको बयानमा श्रीमतीसंग बुबा आमासंग बि’वाद भएपछि छुटिएर एउटै घरमा बस्दै आएका थियौं । तर श्रीमतीसंग कहिले काही झगडा हुने गरेको अधिकारीले ‘स्वुईकार गरेका छन । घरमा झगडा भएपछि श्रीमती माइती गएकी थिइन । माइत गएकी श्रीमतीलाई बैसाख ४ गते लिन जाँदा त्यहाँका गाउँ समाजसंग झ’गडा नग’र्ने भनी कागज समेत गरेर श्रीमतीलाई लिएर आएको प्रहरीको ब’यानमा अधिकारीले उल्लेख गरेका छन ।
मृ’त’क पौडेलको पो’ष्टमाटम घोपा क्याम धरानमा गरिएको छ । माइती पक्षले छानविनको लागि प्रहरीमा उजुरी गरे पनि ह’त्या कि आ’त्मह’त्या भन्ने बिषयमा पो’ष्ट’माटम रिपोट आएपछि मात्रै प्रष्ट हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।
दक्षिण कोरियाले आफ्नै नगरिक सरह नेपालीलाई पनि सरकारी राहत दिने !
१५ लाख को ल्यङा बाट निकै चर्चा मा आएकी आँचल शर्माले लकडाउनमा समस्यामा परेका परिवारलाई बाँडिन् राहत ।
पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं काठमाडौं उपत्यकामा थप ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
August 10, 2020 August 10, 2020 Namastedainik
भर्खरै गयो ४.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प
August 25, 2020 Namastedainik
दिवङ्गत आफन्तको सम्झनामा आज देशभर परम्परागत सांस्कृतिक पर्व ‘गाईजात्रा’ मनार्ईंदै
August 4, 2020 Namastedainik